Success Story of Dinesh
काठमाडौँ जिल्लामा २०४६ साल ४ महिना ४ गतेका दिन जन्मन’भएका दिनेश बसेल आज निक्कै खुशी देखिनुहुन्छ । उहा“ले हामीलाई आफ्नो जीवनको सफलताको कथा यसरी सुनाउनुभयोः जव मैले हेल्भेटास नेपालले महिला, जनजाती, विधवा र समाजमा शिक्षाको कारणले पछाडि परेका व्यक्तिहरुको लागि भनेर पूरै निःशुल्क तालिम प्रदान गर्न लागेको सूचना मेरो आफन्तबाट जानकारी पाएर ग्लोबल एकेडेमी अफ टुरिजम एण्ड हस्पिटालिटी एजुकेशन (गेट) कलेजमा सम्पर्क गरें र त्यहा“बाट गरिने सम्पूर्ण प्रक्रियाहरु पूरा गर्दै म अन्तिम छनौटसम्म पुग्न सफल भए“ । त्यस पछि अगस्ट १८, २०१० देखि सञ्चालन भएको वयेटर तालिमा मैले ३ महिना सफलतापूर्वक भाग लिए“ । हामीलाई तालिममा सिकाउने एक जना सर र एक जना मिस एकदमै सहयोगी हुनुहुन्थ्यो । उहा“हरुले हामीलाई तालिम अवधिभर आवश्यक पर्ने सम्पुर्ण सिप सिकाउनुभयो ।
म दलित परिवारमा जन्मेको मान्छे , दलित भन्ने बित्तिकै सबैले नकारात्मक सोचिदिने ह’नाले म लगाएत सबै दलितहरु यस सम्बन्धि चिन्तित ह’ने गर्दछौ । दलितहरु यसैत पिडित त्यसमा पनि शिक्षाको कमिले यो सम’दायका मानिसहरु अघि बढ्न सकिरहेका छैनन् । जब म ठुलो ह’दै गए मेरो काधमा घरको जिम्मेवारी पनि बढ्दै गयो जागिर खोज्न जान पनि न हातमा सीप न मैले धेरै पढेको कक्षा ८ मा पढ्दा पढ्दै घरायसी आर्थिक समस्याले गर्दा स्क’ल छाड्न’ प¥यो त्यसपछि खेतीपाती गर्न थाले कृषिबाट पनि वर्षभरिलाई खान नप’ग्ने ह’नाले परिवार चलाउन गाह्रो भयो । मेरो मनमा क’नै जिवन उपयागी सीप सिकेर आर्थिक रुपमा आयआर्जन ह’ने काम गर्ने सोच आयो तर आर्थिक स्थिति कमजोर भएको कारण मैले सोचेजस्तो भएन् । होटल सम्बन्धि निश’ल्क तालिम खोलेको थाहा पाएर ब’झ्न जादा शिक्षाबाट बन्चित व्यत्तिहरुको लागि रहेछ र मैले यो तालिमको लागि अन्तरर्वाता पनि दिए र छनौटमा पनि परे तिन महिना तालिम लिए र तालिम सकिने बितिकै जागिर पनि पाए ।
यसरी तालिम सकिने बिक्तिकै जागिर पनि उपलब्ध गराइदिएकोमा म गेट कलेज र हेल्भेटास नेपाललाई धन्यावाद दिन चाहन्छ’ ।
Success Story of Nabaraj
सफलताको कथा...गरे के हुन्न र ?
धादिङ जिल्ला निवासी श्रीमतीे प्रेम क’मारीको कोखबाट २०४२ साल ८ महिना १५ गतेका दिन जन्मन’भएका नवराज सिलवाल आज निक्कै खुशी देखिनुहुन्छ । उहा“ले हामीलाई आफ्नो जीवनको सफलताको कथा यसरी सुनाउनुभयोः जव मैले हेल्भेटास नेपालले महिला, जनजाती, विधवा सामाजिक कारणले पिछडिएका व्यक्तिहरुको लागि भनेर पूरै निःशुल्क तालिम प्रदान गर्न लागेको सूचना मेरो आफन्तबाट जानकारी पाएर ग्लोबल एकेडेमी अफ टुरिजम एण्ड हस्पिटालिटी एजुकेशन (गेट) कलेजमा सम्पर्क गरें र त्यहा“बाट गरिने सम्पूर्ण प्रक्रियाहरु पूरा गर्दै म अन्तिम छनौटसम्म पुग्न सफल भए“ । त्यस पछि अगस्ट १८, २०१० देखि सञ्चालन भएको बारटेन्डरको तालिममा मैले ३ महिना सफलतापूर्वक भाग लिए“ । हामीलाई तालिम सिकाउने दूई जना सरहरु एकदमै सहयोगी हुनुहुन्थ्यो । उहा“हरुले हामीलाई तालिम अवधिभर सक्दो सिप सिकाउनुभयो ।
म धादिङ जिल्लाको एउटा गाउँमा जन्मेको मान्छे त्यसमा पनि शिक्षाको कमि ममा त्यसैको कारण होला घरमा पनि आर्थिक समस्या थियो । घर चलाउने साहारा भनेको पश’पालन थियो घरको सबै सदस्यहरु पश’पालनलाई नै ध्यान दिन्थे तर यसरी नै हामीलाई पनि ध्यान दिएको भए म लगाएत मेरा अरु दाज’भाईहरु पनि शिक्षित ह’न्थे होलान र घरको आर्थिक समस्या स’ध्रिन्थ्यो होला । घरको त्यस्तो समस्या देखेर मलाई घरमा बस्न मन लागेन र काठमाडौ आए धेरै ठाउमा काम पनि गरे हातमा राम्रो सिप नभएर होला काहि पनि टिक्न सकिन । म फेरी गाउमा नै फर्किन लागेको थिए तर गेट कलेजमा निश’ल्क तालिम खोलेको छ भन्ने मेरो एउटा साथिले भन्यो र म ब’झ्नको लागि गए र साच्चैनै त्यो तालिम म जस्ता अशिक्षित व्यत्तिहरुको लागि रहेछ भन्ने ब’झे र मैले एउटा आवेदन फाराम भरे र अन्तरवार्ताको लागि गए पछि कलेजबाट फोन आयो म छनौटमा परेको रहेछ’ ।
गेट कलेजमा तालिम लिएपछि मैले जागिर पनि पाए अहिले म कन्फर्ट जोनमा बारटेन्डरको काम गर्छ’ यो कामबाट मैले मासिक रु ८००० कमाउने र्गदछ’ । यसले गर्दा अहिले मेरो आर्थिक समस्यामा पनि स’धार भएको छ । अहिले म काठमाडौको नयाँबजारमा बस्ने र्गदछ’ मेरो दैनिक जिवन पनि राम्रोसँग चलेको छ मैले खर्च घरमा पठाइदिने ह’नाले घरमा पनि अहिले पहिलाको जस्तो द’ ःख छैन । मेरो भाईहरु लाई भने मैले पढाएको छ’ किनकि उनीहरुले मैले जस्तो द’ ः ख नपाउन भन्ने म चाहन्छ’ ।
यसरी यो तालिम उपलब्ध गराईदिने हेल्भटास नेपाल र गेट कलेजलाई धन्याबाद दिन चाहन्छ’ । जसले गर्दा मेरो जिवनमा परिवर्तन ल्याएको छ । यो तालिम मैले त लिन पाए तर अरु पनि यस्ता व्यक्तिहरु धेरै छन् जो हातमा सिप नभएर बेरोजगार भएर नराम्रो काम गर्न बाध्य छन् । जीवनमा उपयोगी यस्तो सीपले मेरो जिवनमा त परिवर्तन ल्यायो यसरी नै अरुको जिवनमा पनि परिर्वन ल्यायोस यहि कामना गर्छ’ ।
Success Story of Guna Pathak
सीप सगैँ रोजगार सफलताको कथा
सर्लाही जिल्ला, निवासी श्रीमती त’ला माया पाठकको कोख बाट २०३५ साल २ महिना ३ गतेका दिन जन्मन’भएकी श्रीमती ग’ना क’मारी पाठक आज निक्कै खुशी देखिनुहुन्छ । उहा“ले हामीलाई आफ्नो जीवनको सफलताको कथा यसरी सुनाउनुभयोः जव मैले हेल्भेटास नेपालले महिला, जनजाती, विधवा र समाजमा शिक्षाको कारणले पछाडि परेका व्यक्तिहरुको लागि भनेर पूरै निःशुल्क तालिम प्रदान गर्न लागेको सूचना मेरो आफन्तबाट जानकारी पाएर ग्लोबल एकेडेमी अफ टुरिजम हस्पिटालिटी एजुकेशन (गेट) कलेजमा सम्पर्क गरें र त्यहा“बाट गरिने सम्पूर्ण प्रक्रियाहरु पूरा गर्दै म अन्तिम छनौटसम्म पुग्न सफल भए“ । त्यस पछि सेप्टेम्बर १३, २०१० देखि सञ्चालन भएको बरिस्ताको तालिमा मैले १ महिना सफलतापूर्वक भाग लिए“ । हामीलाई तालिममा सिकाउने सर एकदमै सहयोगी हुनुहुन्थ्यो । उहा“ले हामीलाई तालिम अवधिभर आवश्यक पर्ने सम्पुर्ण सिप सिकाउनुभयो ।
म अनपढ हँ’ । मलाई खासमा केही बाहिरी काम गर्न आउदैनथ्यो घरमा पनि आर्थिक समस्या थियो श्रीमानलाई पनि स’गर रोगको समस्या थियो काम गर्न सक्न’ह’नथ्यो द’ई छोरी छन उनीहरुलाई पढाउन गाह्रो थियो श्रीमानको लागि औषधि किन्न पनि गाह्रो ह’न्थ्यो । भनिन्छ अजिङगरको आहारा दैबले प’्याउछँ भन्थे म पनि आफनो जिवन चलाउने एउटा साहारा खोजिरहेको मान्छे त्यहि बेला बरिस्ताको तालिम पनि पाएँ त्यो बेला मलाई ज्यादै ख’सी लागेको थियो ज’न अवस्थामा म थिए त्यो अवस्था सम्झदा मलाई ज्यादै द’ ःख लाग्छ । मेरो त्यो अवस्था ज’न बेला मलाई मेरो छोरीहरुलाई पढाउन गाह्रो थियो परिवार धान्न कठिन थियो ।
अहिले म काठमानडौ स्थित ढोलाहिटी मा बस्छ’ ज’न तालिम मैले पाएँ अहिले म त्यसको सद’पयोग गरिरहेको छ’ गेट कलेजमा १ महिना तालिम गरे त्यसपछि म आफैले थोरै पैसा बैङकबाट निकाले र आफनै सानो कफि सप खालेको छ’ अहिले मेरो दैनिक आम्दानी ३००० देखी ५००० सम्म ह’ने गर्छ ज’न आम्दानीले मेरो घर परिवार राम्रोसँग चलेको छ। श्रीमानको पनि स्वास्थ्यमा स’धार आएको छ । उहाँले हास्दै भन्न’भयो अहिले त मलाई लाग्छ सबै भन्दा ठ’लो चिज पैसा पो रहेछ । मसँग पैसा नह’दा ज’न द’ ः ख मैले पाएको थिए ।
मैले यो तालिम प्राप्त गर्नको लागि धेरै कोसिस गरेको थिए । तालिम लीनको लागि नै भनेर धैरैको सहभागि थियो अन्तरवार्ताबाट म लगाएत ३८ जना छनौट भयौँ । स’रुमा त मैले यो तालिम पाउछ’ जस्तो लाग्दैनथ्यो सायद धेरै सहभागि भएर होला । अन्तर्रवार्ता भएको ३ दिन पछि गेट कलेजबाट फोन आयो तालिमको लागि बोलाउन’भयो त्यसपछि थाहापाएँ मेरो नाम पनि निस्केको रहेछ । १ महिना सम्म बरिस्ता को तालिम लिए् ।
म जस्तो द’ ःखी लाई यो तालिम उपलब्ध गराईदिने हेल्भटास नेपाल र गेट कलेजलाई धन्यावाद दिन चाहन्छ’ । मेरो द’ःखी जिवनलाई सानो सिप सिकाएर ठुलो दलदलबाट मुक्त गराउन सहयोग प’्याउने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न सम्पुर्ण व्यक्त्तिहरुलाई जयजय होस् भन्दै आगामी दिनहरुमा अन्य म जस्तै द’खीहरुलाई खोज गरी तिनिहरुलाई पनि यस्तो किसिमको कार्यक्रममा सहभागी गराउन सफल होस् भन्ने आशा राख्दछ’ ।
Success Story of Dawa
संख’वासभा जिल्ला,हटिया गा.वि.स वार्ड नं. १ निवासी श्रीमती फिन्ज’म भोटेको कोख बाट २०३६ साल १२ महिना १२ गतेका दिन जन्मन’भएकी श्रीमती दावा साङम’ भोटे आज निक्कै खुशी देखिनुहुन्छ । उहा“ले हामीलाई आफ्नो जीवनको सफलताको कथा यसरी सुनाउनुभयोः जव मैले हेल्भेटास नेपालले महिला, जनजाती, विधवा र समाजमा शिक्षाको कारणले पछाडि परेका व्यक्तिहरुको लागि भनेर पूरै निःशुल्क तालिम प्रदान गर्न लागेको सूचना मेरो आफन्तबाट जानकारी पाएर ग्लोबल एकेडेमी अफ टुरिजम हस्पिटालिटी एजुकेशन (गेट) कलेजमा सम्पर्क गरें र त्यहा“बाट गरिने सम्पूर्ण प्रक्रियाहरु पूरा गर्दै म अन्तिम छनौटसम्म पुग्न सफल भए“ । त्यसपछि अगस्ट १८, २०१० देखि सञ्चालन भएको हाउसकिपिङको तालिमा मैले ३ महिना सफलतापूर्वक भाग लिए“ । हामीलाई तालिममा सिकाउने दूई जना म्याडमहरु एकदमै सहयोगी हुनुहुन्थ्यो । उहा“हरुले हामीलाई तालिम अवधिभर सक्दो सिप सिकाउनुभयो ।
मलाई नै हेर्नुहोस् न म एकल महिला ह’ँ । मेरो श्रीमान हिमाली भेगमा काम गर्न’ ह’न्थ्यो र त्यहा हिमपहिरोमा परि वहाँ को मृत्य’ भयो त्यो बेला मेरो छोरा र्भर्खर जन्मेको थियो र घरको जिम्वेवारी पनि मेरो काधमा थियो । घरका सबै पविार बेरोजगार थिए घरमा आर्थिक समस्या थियो र मलाई एकदम गाह्रो ह’न्थ्यो । मेरो घरमा आर्थिक समस्या भएपनि मलाई मेरो परिवारले भने साथ दिन’ भएको थियो कस्तो साथ भने हाउसकिपिङ तालिममा जानको लागि धेरै साथ पाएको थिएँ । तालिमा जादा सास’ले घरमा बसि मेरो छोरा हेरिदिन’ ह’न्थ्यो जसले गर्दा मलाई सजिलो भएको थियो । ज’न तालिम मैले तीन महिना सम्म मेहनतका साथ प’रा गरे त्यसको फल अहिले म चाख्दै छ’ । मैले काम गरेको देखेर नै होला तालिम सकिने बित्तिकै गेट कलेजमै जागिर पनि पाएँ । त्यो जागिरको लागि धेरै साथिहरुले अन्तरवार्ता दिएका थिएँ । ज’न अन्तरवार्ताबाट म छनौट भएँ र काम गर्न थाले । आज यही तालिमको कारण म वेरोजगार बस्नुपरेको छैन । जुन कलेजले हामीलाई तालिम प्रदान गरेको हो म आज त्यही कलेजमा हाउसकिपिङको केही नया“ कुरा सिक्दै काम गरिरहेको छु । अहिले म आफू राम्रोसँग काम गर्न सक्ने भएको छ’ । मैले राम्रो सँग काम गरेकोले होला मलाई सबैले राम्रो मान्न’ह’न्छ जस्तो मलाई लाग्छ । मेरो हातमा सिप नह’दा ज’न द’ ःख मैले पाएको थिए अहिले त्यस्तो छैन । मैले काम गरेर ल्याएको पैसाले मेरो घर राम्रोसँग चलेको छ आफ’लाई मन परेको सामान आफ’ले कमाएको पैसाले किन्न सक्ने भएकी छ’ ।
अहिले म काठमाडौ स्थित कपनमा परिवारका साथ बस्ने गर्छ’ । बिहानै सबेरै उठ्छ’ एकछिन घरको काम सघाउछ’ र बिहान ८ बजे कलेजमा प’ग्छ’ र काम गर्न थाल्छ’ । बिहानको खाना भने सम्पुर्ण स्टार्फलाई गेट कलेजमै खाने व्यबस्था भएको ह’दा म कलेजमा नै खाने गर्छ’ । दिनभर काम गदैँ रमाईलो गदैँ समय गएको पत्तै ह’दैन र बेल’का ४ बजे घर फर्रकन्छ’ ।
ज’न तालिम हेल्भटास नेपाल र गेट कलेजले म जस्ता व्यक्तिहरुलाई व्यबस्था गरिदिएको छ यस्तो तालिम अरु व्यक्तिहरुले पनि पाउन । ज’न तालिमको कारण म अहिले यो अवस्थामा प’गेको छ’ । मलाई लगाएत अरु साथीहरुलाई यो तालिम उपलब्ध गराईदिने हेल्भटास नेपाल र गेट कलेजलाई धन्यावाद दिन चाहन्छ’ ।
Success Story of Krishna
सीप पछिको रोजगार
भत्तप’र जिल्ला, निवासी श्रीमतीे दर्गालक्ष्मीेको कोख बाट २०४४ साल १० महिना ११ गतेका दिन जन्मन भएको कृष्ण स’न्दर बुढा श्रेष्ठ आज निक्कै खुशी देखिनुहुन्छ । उहा“ले हामीलाई आफ्नो जीवनको सफलताको कथा यसरी सुनाउनुभयोः जव मैले हेल्भेटास नेपालले महिला, जनजाती, विधवा र समाजमा शिक्षाको कारणले पछाडि परेका व्यक्तिहरुको लागि भनेर पूरै निःशुल्क तालिम प्रदान गर्न लागेको सूचना मेरो आफन्तबाट जानकारी पाएर ग्लोबल एकेडेमी अफ टुरिजम एण्ड हस्पिटालिटी एजुकेशन (गेट) कलेजमा सम्पर्क गरें र त्यहा“बाट गरिने सम्पूर्ण प्रक्रियाहरु पूरा गर्दै म अन्तिम छनौटसम्म पुग्न सफल भए“ । त्यस पछि अगस्ट १८, २०१० देखि सञ्चालन भएको कन्टिनेन्टल क’क तालिमा मैले ३ महिना सफलतापूर्वक भाग लिए“ । हामीलाई तालिममा सिकाउने दूई जना सरहरु एकदमै सहयोगी हुनुहुन्थ्यो । सायद उहा“हरुले हामीलाई तालिम अवधिभर सक्दो सिप सिकाउनुभयो ।
म भत्तप’रमा जन्मेको ह’ँ भत्तप’र विकसित जिल्ला भएपनि मेरो परिवारमा भने कहिलै परिवर्तन आएन मेरो घरमा म सँग गरेर ६ जना सदस्य छौँ । घरमा आर्थिक समस्या थियो खेतिबाट उब्जीएको अन्नले एक वर्ष पनि खान प’ग्दैनथ्योँ शिक्षाको कारण काम पाउन गाह्रो थियो आर्थिकको कारण हामी छोराछोरीले पढ्न पाएनौ । म काम खोज्नको लागि भौतारिरहेको थिए जहाँ गए पनि पढाइको मात्र क’रा गर्ने हुनाले मलाई काम खोज्न जान मन लागेन र त्यतिकै घरको काम सघाएर बस्थे त्यहि बेला मेरो साथीले आएर गेट कलेजमा होटल सम्बन्धी निश’ल्क तालिम खोलिएको रहेछ तिमी ब’झ्न जाउँ भन्यो र म त्यो तालिममा सहभागि ह’नको लागि ब’झ्न भनेर गए त्याहा गएर ब’झ्दा एस.एल.सी. नदिएका व्यत्तिहरुको लागि रहेछ म पनि आठ सम्म पढेको ह’नाले मेरो लागि पनि उपयुत्त रहेछ । म जस्ता धेरै व्यक्तिहरुले फर्म भरीसकेका रहेछन मैले पनि अन्तरवार्ताको लागि फर्म भरे र अन्तरवार्ता पनि दिए पछि थाहा भयो म पनि कन्टिनेन्टल क’कको लागि छनौट भएको रहेछ’ । तीन महिना निरन्तर तालिममा सहभागि भएर कन्टिनेन्टल क’क सम्बन्धी धेरै ज्ञान हासिल गरे ।
तालिम सकिने बित्तिकै रोजगारको पनि व्यवस्था गरिदिने ह’नाले मैले काम त’रुन्त पाए गेट कलेजमा नै मेन किचनमा किचन हेल्पर चाहेको रहेछ त्यो बेला म छनौटमा परे सीप सिकेपछि काम गर्दाको अन’भव र काम नसिक्दाको अन’भव छ’ट्टै ह’दो रहेछ । मैले काम गरेर ल्याएको तलबले मेरो घर अहिले रामा्रेसँग चलेको छ । मलाई यो तालिम उपलब्ध गराई दिने हेल्भेटास नेपाल र गेट कलेजलाई धन्यावाद दिन चाहन्छ’ ।